पोखरेली सपना नै मेरा एजेन्डा हुन्ः नेकपा उम्मेदवार विद्या - Samadhan News
पोखरेली सपना नै मेरा एजेन्डा हुन्ः नेकपा उम्मेदवार विद्या
समाधान संवाददाता २०७६ मंसिर १ गते १३:३७
राजनीतिमा चासो राख्ने सबैको ध्यान अहिले कास्की २ मा केन्द्रीत छ । देशभर प्रतिनिधिसभाका लागि चुनाव हुने एकमात्र क्षेत्र कास्की २ का उम्मेदवारहरु चुनावी प्रचारमा व्यस्त छन् । कास्की २ मा नेकपा उम्मेदवार विद्या भट्टराई अधिकारीले शनिबार पोखरा ११ फूलबारी, काहुँ लगायतका क्षेत्रका मतदातालाई घरघरै पुगेर भेटिन् । घर भएका ठाउँमा पैदल र नभएका ठाउँमा गाडीमा हिडेकी विद्यालाई १ सय १० वर्षीय गौरी आचार्यले विजयको आर्शीवाद दिइन् ।
नेकपा केन्द्रीय सदस्य एवं गण्डकी प्रदेश सहइन्चार्ज खगराज अधिकारीले उपनिर्वाचन जितेपछि विद्या मन्त्री बन्ने बताए । उनले भने, ‘यो ३ वर्ष अन्य पार्टीले कसैलाई पनि मन्त्री बनाउन सक्दैनन्, नेकपाले मात्र सक्छ । यो क्षेत्रका सांसदलाई मन्त्री बनाएर समृद्धि ल्याउन योगदान गर्नुहोस् ।’ उनले नेकपा नेतृत्वको सरकारले चीनबाट समुन्द्रसम्म ७ वटा नाका खोल्ने र भूपरिवेष्टित मुलुकबाट भूजडित मुलुकमा बनाउने ऐतिहासिक काम गरेको बताए ।
पोखरा ३३ मा भएको बुद्धिजीवीको भेलाले निर्वाचन परिचालन कमिटी गठन गरेको छ । नेकपा केन्द्रीय सदस्य भीम कार्कीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको भेलाले यज्ञप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा ३३ सदस्यीय कमिटी बनाएको हो । कमिटी उपाध्यक्षमा तुलसीमणि अधिकारी, सचिवमा गिरीधारी अधिकारी, सहसचिवमा राजु पौडेल र कोषाध्यक्षमा पारशमणि पौडेल छन् । कमिटी मतदाताको घरघरसम्म पुगेर पार्टीका एजेन्डबारे जानकारी गराउनेछ ।
भेलालाई नेकपा उम्मेद्वार विद्या भट्टराई अधिकारीले नीति निर्माण र विकाश निर्माणको एकसाथ नेतृत्व गर्ने प्रतिवद्धता गरिन् । उनले नेकपाको पक्षमा देखिएको जनलहरका कारण विपक्षी आत्तिइसकेको दाबी गरिन् ।
कम्युनिस्टहरुले वृद्धवृद्धालाई मार्छ भन्ने भ्रम चिर्दै साबिक एमालेको सरकारको पालामा वृद्धभत्ता दिने प्रचलन सुरु भयो । वृद्धहरुलाई सामाजिक सुरक्ष दिने सुरुआत गरेको नेकपालाई पोखरा ११ मा ८४ वर्षीया तारादेवी गौतमले मत मागिन् । घरदैलोका क्रममा उनको घरमा पुगेको नेकपा प्रचार टोलीलाई शुभकामना र आर्शीवाद दिँएपछि उनी नेकपाको झण्डा बोकेर चुनाव प्रचारप्रसारमा केही घर हिँडिन् ।
विद्यालाई जिताउन टोल टोलमा प्रचार समिति
पोखरा ४ शनिबार भएको भेलाले बुद्धिजीवीको तर्फबाट चुनाव प्रचारप्रचार प्रसार गर्न दुर्गादत्त भण्डारीको संयोजकत्वमा १६ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिको सहसंयोजकमा रामचन्द्र पहारी र नारायण अधिकारी, सदस्यमा गीता पौडेल, नवराज बास्तोला, रञ्जन शर्मा पराजुली, निदेश कोइराला, टोपबहादुर थापा, रामजी न्यौपाने, माधवप्रसाद सुवेदी, डा. खेमराज भट्ट, नवराज पौडेल, मानबहादुर केसी, दिलकुमारी पौडेल, शान्ति थापा, महेन्द्र आले, सत्यराज सुवेदी र शिवकुमारी आधिकारी छन् । डा. कृष्णराज अधिकारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय सल्लाहकार समिति पनि गठन भएको वडा नम्बर ४ का इन्चार्ज दामोदर बैरागीले जानकारी दिए ।
यता, बुद्धिजीवी संघसंस्था पेशागत समन्वय उपसमिति भलामको भेलाले रवीन्द्रका अधुरा योजना पूरा गर्नका लागि विद्यालाई जिताउनुको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । विद्याले पेशागत संगठनमा खेलेको भूमिका, पार्टी संगठनमा रहेर खेलेको भूमिकालाई मूल्यांकन गरेरै उम्मेद्वार बनाएकाले सबै मिलेर जिताउन आग्रह गरेको प्राडा कृष्ण केसीले जानकारी दिए । भेलामा नेकपाका नेताहरु दामोदर बैरागी, विश्वप्रकाश लामिछाने लगायत सहभागी थिए ।
‘मलाई पाल्ने छोरी विद्या हुन्’ नेकपाको अभियान पोखरा ८ मा पनि जारी छ । पोखरा ८ की यराधादेवी चालिसले शुक्रबार टोलमा पुगेकी विद्यालाई शुभकामनासहित भोट पनि अरुलाई पनि नेकपालाई मत दिन आग्रह गरिन् । उनले भनिन्, ‘मलाई पाल्ने यही छोरी हो । रवीन्द्र सपना पूरा गर्न र देशको मुहार फेर्न विद्यालाई भोट दिऊ ।’ वडाभित्र टोल कमिटी गठन गरी उम्मेदवारभन्दा पहिला कार्यकतालाई मतदाताका घर पुर्‍याउने र त्यसपछि उम्मेदवारसहित घरदैलो गर्ने रणनीतिसहित नेकपा पोखरा ८ जुटेको यहाँको चुनावी कमान्ड समालेका नेकपा केन्द्रीय सदस्य शारदाप्रसाद सुवेदीले बताए । आइतबार उम्मेदवारसहित पोखरा ८ मा आयोजना हुने उनले बताए । आइतबार बिहान डेढ घण्टा घरदैलो र त्यसपछि चालिसेचोकमा र साँझ ४ बजे बगालेटोलमा कोणसभा गरिने सुवेदीले जानकारी दिए ।